Nhau - Makorokoto kune edu eIndia mumiririri kuvhura nyowani showroom uye imba yekuchengetera
Makorokoto kune mumiriri wedu weIndia kuvhura kweye itsva showroom uye imba yekuchengetera
Pane gumith, Ndira, 2020, mumiriri wedu muIndia vanoita mhemberero huru yekuvhura yavo imba yekuratidzira nyowani uye imba yekuchengetera. Mukuru Wedu Mukuru VaEric Wong, vamiririri vebazi remichina uye nyanzvi vanoenda kumhemberero nekucheka ribhoni.
Iye CEO wemumiriri anotanga aita hurukuro yekutenda yekutenda vaenzi nekuve pano nekuzivisa nezve imba nyowani yekuratidzira uye chiono chavo chebudiriro yemberi. Anoti kuvandudza kwekambani hakugone kuitika pasina rutsigiro rwevatengi uye nerutsigiro rwevagadziri veChina. Vatengi kuvimba ndiko kukurudzira kwavo uye kutengeswa kweChinese uye rutsigiro rwebasa ndiko kuvimba kwavo.
Maneja wedu VaEric Wong vanoitawo hurukuro yekukorokotedza. Iye anotaurira kuti isu tiri kutarisira mberi kune yakanyanya nani uye yepamusoro nhanho pakati peiye mumiririri nesu. Isu hatichengetedze chero kuedza kutsigira chero chinhu. Iye anonyanya kutsanangura mukana weiyo tekinoroji yatiri kushandisa kune iyo peeling mitsara. Isu tiri vekutanga kushandisa kaviri roller kutyaira uye vane hunyanzvi uye vane ruzivo mune izvi kusvika zvino.
Zvinhu zvinonyanya kukwezva ndeye peeling muchina mutsara uye michina inoenderana yakaratidzwa pamberi penzvimbo nyowani yekuratidzira uye China neIndia mireza inobhururuka mudenga. Makumi ezviuru zvevashanyi anouya pakuvhura uye zvinokonzeresa kunzwa muKerala. Vatengi vakawandisa vanoratidza kufarira kwavo kukuru mumachina uye vanobvunza. Mamaneja edu uye nyanzvi zvakare anobatsira kuunza mashini mashandiro, zvakanakira uye mashandiro. Vaenzi vanofadzwa kwazvo nehunyanzvi hwepamusoro hwehuni peeling mutsara. Pazuva rimwe chetero, mumiriri wedu anowana anosvika makumi maviri seti peeling muchina odha uye gamuchira kumberi.
Setsika, mushure memhemberero yapera, muenzi nevashanyi vanofarira kudya kwemasikati kwakanaka kwazvo uye munhu wese ari kutaurira kubatsirwa zvakanyanya kubva pane izvi. Kuvhura kunouya kumhedzisiro inobudirira zvakafanana nezvataitarisira. Tinoshuvira kuti mumiriri awane kuvandudzwa kuri nani mumazuva anouya.
Post nguva: Jan-10-2020